Nankasitraka ny Vavolombelon’i Jehovah ny Manam-pahefana Tany Meksika
MEXICO—Nankasitrahan’ny manam-pahefana ny Vavolombelon’i Jehovah satria 250 mahery tamin’izy ireo no nirotsaka an-tsitrapo nanadio ny kianja Baldomero “Melo” Almada, tamin’ny 7 Jona 2014. Nila nodiovina mantsy ilay toerana satria hisy zavatra hotokanana tao.
Efa amam-bolana ny Profesora Antonio Cota Márquez, filohan’ny fikambanana misahana ny fanatanjahan-tena ao Huatabampo, any Meksika, no nitady mpiasa an-tsitrapo hanadio an’io kianja io. Nasiana toerana vaovao fanaovana hazakazaka mantsy tao, ary hitokana azy io ny governora ny 7 Jolay 2014. Namaly ny antso nataon’ny Profesora Cota ny Vavolombelon’i Jehovah ka nanampy azy sy ireo mpiasa tao amin’ilay kianja. Betsaka ny zavatra nila natao, ohatra hoe nanala ny fako, nandoko ny tabilao ho an’ny baskety, ary nikarakara ny bozaka.
Ato amin’ity efitrano lehibe ity ny Vavolombelon’i Jehovah no manao an’ilay fandaharam-pampianarana Baiboly maimaim-poana.
Nanapa-kevitra ny hiantso ny Vavolombelon’i Jehovah ny Profesora Cota satria efa zatra mikarakara ny iray amin’ny efitrano lehibe ao amin’ilay kianja izy ireo. Ao mantsy izy ireo no manao fandaharam-pampianarana Baiboly maimaim-poana amin’ny fiteny espaniola sy mayo. Nandinika ny fomba nanadiovan’ireo Vavolombelona sy nikarakaran’izy ireo an’ilay kianja ny Profesora Cota, ka hoy izy rehefa nadinadinina: “Faly izahay mahita olona maro mahafoy ny fotoanany mba hanadiovana an’ity kianja ity.” Hoy izy tatỳ aoriana: “Mankasitraka ny asa nataonareo androany izahay amin’ny anaran’Andriamatoa Ramón Díaz Nieblas, ben’ny tanànantsika. Mahazo mampiasa an’ity toerana ity foana ianareo satria mahay mandray andraikitra sady mora iarahana miasa.”
Meksika: Gamaliel Camarillo, tel. + 52 555 133 3000
Miaro ny Tontolo Iainana ny Vavolombelona ka Nomena Mari-pankasitrahana